नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे ? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, विशेष, समचार, समाचारहरु, स्वास्थ्य → नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे ?
नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे ?
August 28, 2015११०१ पटक
गोकर्ण प्रकाश ज्ञवाली/गुल्मी ।
संसारमा नपाइने कुरा फेसबुकमा पार्इंदो रहेछ, र रामदेखि रामायण, गीतादेखि गीतासार, बैंककदेखि प्रचण्ड निवास, नारायणहिटीदेखि वासिंगटन डिसी, गगनको गनगन र कनकनदेखि केपीको बोलीको गोली । नेताले फेसबुक चलाउँछन, फेसबुकले देश चलाएको छ ।
धर्मनिरपेक्षता यहि फेसबुकमा स्थापित छन् । कसैले डगमगाउन नसक्ने हिन्दुत्तोको खोजी गर्दै नारा(जुलुस(खबरदारी(धर्ना यहिँ देख्न पाइन्छ । जातीय राज्यको नाममा फेसबुकमा यत्रो बबन्डर मच्चिरहेको छ भने साँच्चै देशमा यस्तो हुने हो भने के होला ? नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे ?
गच्छदारको राजनीतिक धारदेखि तरबारसम्मको कुरो यहिँ छ । कतै घैंटे चरी कठैबरी । कतै प्रसंसा गुण्डागर्दी बिरुद्ध नेपाल प्रहरी साहसी र बहादुरी । बाबुराम भट्टराई फेसबुकमा आउँछन या आउँदैनन उनको समर्थकले खोलेका तमाम पेज बनेका छन् जहाँ उनको ट्विट फेसबुकमा तुरुन्तै आउँछ । प्रचण्डलार्इ न फेसबुक चलाउने फुर्सद न ट्विटर बरु सुशील कोइरालाको ट्विटको चर्चा फेसबुकमा हिजोआज व्यापक छ ।
फेसबुकमा उनको नाममा बनेका नक्कली लिंक र नक्कली ट्विट भएको खबर छ । रास्ट्रपति रामवरण यादव फेसबुक चलाउँछन या चलाउँदैनन उनले थोरै मुख उक्काए, मुख ठुलो पारे भनेर हेडन्युजको लिंक फेसबुकमा तुरुन्तै आउँछ ।
युवासंघ, नेबिसंग र अखिल क्रान्तिकारिका झन्डा, चन्दा र उदण्डका कुरा फेसबुकमा फेस्बुके पोस्टको त कुरै छोडौं, संघियताको नाममा धेरै देशका चित्र बने चित्रबहादुरको चित्रको पनि फेसबुकमा राम्रै चर्चा छ । देशका महत्वपूर्ण भौतिक संरचना ध्वस्त पार्यो भूकम्पले ।
देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारे नेताले । पहिचान र अधिकारको नाममा आन्दोलन । फेसबुकमा चिन्ता र सरोकार छ नरहने होकी भनेर नेपाल र नेपालीको अस्तित्व र पहिचान । अखण्ड राज्य यहिँ छ, फेसबुकमा टुक्रा टुक्रा परेको राज्य विस्तार भैसके । शासकहरुको पोस्ट दिनदिनै पढ्न पाइन्छ । नेतागणलार्इ तालीदेखि गाली यहिँ छ ।
जातीय आरक्षणको नाममा राज्यले नागरिकमाथि गरेको विभेदको उत्कर्ष गुजरातको पटेल आन्दोलनको खबर यहि फेसबुकको पानाभरी छ्यापछ्याप्ती छ । कोहि भन्दै छन् फेसबुकमा ए सुशील दा मोदीलाई फोन गरेर भन्नु पर्यो शान्ति, सुव्यवस्था कायम गरी संयम अपनाउनु पर्यो । वार्ता र सहमति गरेर समस्या सुल्झाउनु पर्यो ।
नेपालले यसमा सक्ने सहयोग गर्छ भनेर । उता ट्विट हुन्छन यता फेसबुकमा खबर बन्छन् । पहिचानको लागि लड्न मर्न आज सत्तालोकबाट ट्विट आउँछ, भोलि जातीय आन्दोलनको नाममा भाला, खुँडा, तरबार, बन्दुक बोकेर आफ्नै सुरक्षा दिने सिपाही, नेपालीले नेपालीलाइ सिध्याईन्छ । अनि पर्सिपल्ट भनिन्छ घुस पैठ, हैट फेसबुके राजनीति ।
हिजोको मेरो देश नेपाल आज परदेश हुन थालेको छ । अनि म नेपाली परदेशी । त्यसैले आउनुहोस् अन्तिम सास रहेसम्म देशप्रेमको भावना बोकेरै बाँचिरहने प्रण गरौँ । जय नेपालभूमि ! जय नेपालीपन !